चाडपर्वहरुमा उपहार बीमायोजना दिने गर्नुहोस् ! – Insurance Khabar
चाडपर्वहरुमा उपहार बीमायोजना दिने गर्नुहोस् !
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७५, मंगलवार २०:०१
नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरु दशैँ, तिहार तथा छठ भिँत्रदै छन् । यस्ता चाडपर्वहरु नेपाली समाजका मूख्य चाडहरु हुन् । यी विभिन्न चाड पर्वहरु लाई नेपालीहरुले हर्षो उल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । मिठा मिठा परिकारहरु, आफन्तजन सँगको भेटघाटका साथमा यी पर्वहरु मनाउने गरिन्छ । विशेषत यी चाडवाडहरु बालबालिकाका लागि बढी महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
दशैमा राम्रो राम्रो लगाउँने र खानो केटाकेटी रहर हुन्छ । यदी तपाई पनि आफना सन्तीतलाई खुशी बनाउँन केही उपहार दिने योजना बनाउँनु भएको छ भने बिचार गर्नुहोस । तपाईले दिएको उपहार तपाईको सन्ततीको लागी कतिको उपयोगी हुन्छ । अथवा उक्त उपहार कति अवधिको लागी हुन्छ ।
यदि तपाईले महंगो कपडा वा ग्याजेट उपहार दिने सोच बनाउँनु भएको छ भने फेरी पनि एक पल्ट सोच्नु होस, यस्ता महंगा र छोटो अवधिको सामाग्री भन्दा सन्ततीलाई बीमायोजना उपहार दिनुहोस् ।
बीमा भनेको सुरक्षा हो । केटाकेटीको लागी गरिने बीमाले भोलि उनीहरुको उच्च अध्ययन र विवाहको लागी उपयोगी हुन सक्छ । छोरीछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बेला तपाईले कर्जा लिनुपर्ने छैन न त विवाह गर्दा तपाईले कर्जा लिनुपर्नेछ ।
आज देखि नै बीमा योजना खरिद गरी बचत गरिदिनु भयो भने भोलि दिनमा संरक्षकलाई केही भएको खण्डमा पनि बिमाले छोराछोरीलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । त्यसैले यदि सन्ततीको राम्रो आर्थिक भविष्य देख्नु चाहनहुन्छ भने उपहारमा बीमा दिने बानीको विकास गरौँ ।
दक्षिणाको उपयोग गर्न सिकाउँ
दशै तिहार भनेकै केटाकेटीको लागी हो । त्यसमा पनि दशैमा आफन्तबाट टिका लगाएर पाउँने दक्षिणा र तिहारमा भैलो खेलेर पाउँने पैसा केटाकेटीको लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी जम्मा भएको रकम के गर्नुहुन्छ ? यदी केटाकेटीलाई उक्त रकम दिने हो भने चकलेट खाएर वा खेल्ने सामाग्रीमा नै खर्च गर्छन् । जसको कुनै उपयोगीता नै छैन । त्यसैले छोराछोरीलाई बचत गर्न आजै देखि सिकाउँनु होस । यसका लागी यसरी जम्मा भएको रकम बिमायोजना खरिद गर्नमा लगानी गर्नुहोस । छोराछोरीलाई भन्नुहोस उसको भविष्यको लागी जम्मा हुँदैछ भनेर । अपुग भएको रकम आफुले थपिदिनुहोस ।
उसो त तपाईले बैंकमा पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । तर, बैंकमा राखेको रकम आवश्यक पर्दा निकाल्न मन लाग्छ । तर, बीमा भनेको फोर्स सेभिङ्ग पनि हो । त्यसैले यही समयमा बीमा गराउँनुहोस् । दशैँको बेला बीमा गर्नु भयो भने अर्को दशैमा नै किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला पनि यसरी नै रकम जोहो गर्न सक्नुहुन्छ ।
हाल नेपालमा १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । तपाईका बालबालिकाको लागि सुहाँउदो उपयुक्त हुने बीमा पोलिसि यस पालिको चाडवाडमा किनिदिनुस् । बीमा जोखिम हस्तान्तरणको एक पाटो हो । अहिले तपाईले तपाईको बालबालिकाको बीमा गरिदिनु भयो भने उनीहरुको पढाई खर्चको लागि पछि तपाई लाई समस्या पर्दैन । आज बालबालिकाको नाममा गरिएको बीमाले उनीहरुको भविष्यको लागि, उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।